Blockchain News 28 Janoary 2018 - Blockchain News
Janoary 28, 2018 Admin
Hampijanona manamafy ny fifandraisany amin'ny auditor no nifarana
hampijanona, ny issuer ny dolara-pegged cryptocurrency USDT, hoy ny fifandraisany amin'ny fanaraha-maso hentitra Friedman LLP no nifarana.
Friedman efa miasa amin'ny ny fanaraha-maso ny hampijanona, izay manana fifandraisana akaiky amin'ny cryptocurrency fifanakalozana Bitfinex. Feo mpitsikera ny ny roa toko no milaza fa efa pirinty hampijanona famantarana tsy misy fotony ireny mba handroaka ny vidin-bitcoin eo amin'ny fifanakalozana.
Nanoratra e-mail ny mpitondra tenin'ny fanambarana ny fanambarana mivaky:
“Isika manamafy fa ny fifandraisana amin'ny Friedman dia levona… tsy misy modely napetraka mba hitarika ny dingana na benchmark namely azy mafy mba handrefy ny fahombiazana.”
Thailand ny 2 tanàna lehibe indrindra Chiang Mai mahita Bitcoin voalohany vending milina
Ny Bitcoin vending milina no manamarika ny voalohany amin'ny karazany ao Thailand tanàna faharoa lehibe indrindra, izay manana ny marina 1 tapitrisa ao amin'ny faritanin'i, antsoina “Metro” Chiang Mai.
Ny milina dia manana mikasika efijery ary miasa amin'ny alalan'ny mitily ny QR code (manan-tsaina angamba amin'ny alalan'ny finday) fa ny mandray Bitcoin kitapom-batsy adiresy ny Bitcoin dia nalefa tany. Misy ihany koa ny rantsan pirinty scanner ny milina.
Izany dia miorina ao amin'ny upscale sy malaza “Nimman” Chiang Mai faritra. Ny Cafe atao hoe Cube 7 ary lehibe fisotroana kafe amin'ny seza anaty sy ivelan'ny trano, ary koa ny efitrano fivoriana. Hoy ny tompon-javatra izy ireo mikasa ny manaiky Bitcoin ho an'ny sakafo sy zava-pisotro ao amin'ny hoavy tsy ho ela, izay mety hahatonga azy ireo hanatevin-daharana ny 5 orinasa hafa ao an-tanàna Bitcoin fanekena araka ny coinmap.org
Nijirika Tokyo cryptocurrency fifanakalozana mba hamaly tompony $ 425M
Tokyo-monina cryptocurrency fifanakalozana Coincheck Inc hoy ny Alahady dia mety hiverina about 46.3 lavitrisa Yen ($425 tapitrisa) dia very ny mpijirika roa andro lasa izay ao amin'ny iray amin'ireo lehibe indrindra-indrindra halatra nomerika vola.
Loharanom-baovao roa amin'ny fahalalana mivantana ny raharaha hoy ny Financial Services Japana Agency (FSA) Nandefa filazana ny teny mafy ny firenena 30 orinasa izay miasa fifanakalozana vola virtoaly mba hampitandrina ny hafa azo atao tserasera-fanafihana, mampirisika azy ireo dingana ny fiarovana.
Blockchain News 15 Janoary 2018
Bitcoin mpifaninana Ripple ...
Blockchain fandaniana ...
Previous Post:Ahoana no very Efa ho 200 Bitcoin varotra ity volana lasa
Next Post:Blockchain News 29 Janoary 2018